နတ်မတောင် အမျိုးသားဥယျာဉ်တွင် ပညာပေးပြခန်း တစ်ခုကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃ဝဝဝဝ အကုန်အကျခံ တည်ဆော?? - Yangon Media Group
နတ်မတောင် အမျိုးသားဥယျာဉ်တွင် ပညာပေးပြခန်း တစ်ခုကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃ဝဝဝဝ အကုန်အကျခံ တည်ဆော??
ကန်ပက်လက်၊ မတ် ၈
ချင်းပြည်နယ် ကန်ပက်လက်မြို့ရှိ နတ်မ တောင်(ခေါနုသုမ်)အမျိုးသားဥယျာဉ်တွင် ပညာပေးပြခန်းတည် ဆောက်ရန် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃ဝဝဝဝ လျာထားသတ်မှတ်ထားပြီး နတ်မတောင်အမျိုးသားဥယျာဉ်အနီး မြေနေရာတွင်တည်ဆောက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ချင်းပြည်နယ် အစိုးရတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက မတ် လ ၇ ရက်တွင် ပြောသည်။
”၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်စီမံချက်နဲ့ ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်၊ အခုတည်ဆောက်တဲ့ပြခန်းမှာ အမျိုးသားဥယျာဉ်ထဲက မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံတွေကို အထောက် အထားတွေနဲ့ ခိုင်ခိုင်မာမာပြသထားဖို့ရှိတယ်၊ သစ်ခွပင်တွေကို အမျိုးအစားအလိုက် ဓာတ်ပုံတွေ၊ ဒေသတွင်းနေထိုင်ကြတဲ့ ချင်းတိုင်းရင်းသား မျိုးနွယ်စုသမိုင်းမှတ်တမ်း၊ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်း၊ ရိုးရာယဉ် ကျေးမှုဓလေ့တွေကို အစုံအလင် ပြထားဖို့ စီစဉ်နေပါတယ်”ဟု နတ်မတောင်အမျိုးသား ဥယျာဉ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးသိန်းလွင်က မတ် ၈ ရက်တွင် ပြောကြားသည်။
နတ်မတောင်အမျိုးသားဥယျာဉ်တွင် ကမ္ဘာပေါ်၌ အလွန်ရှားပါးနေပြီဖြစ်သည့် ဒေသရင်းငှက်မျိုးစိတ် ဖြစ်သည့် မျက်ခုံးဖြူငှက်ပြာခြောက်အပြင် အခြားရှားပါးငှက်များ ကြည့်ရှုနိုင်သည့် တောတွင်းစခန်း တစ်ခုကိုလည်း တည်ဆောက်ထားပြီး ပြည်တွင်းပြည်ပ ဧည့်သည်များအနေဖြင့် ဇီဝမျိုးစုံ၊ မျိုးကွဲအပင်မျိုးစိတ်နှင့် လိပ်ပြာတို့ကို သဘာဝအတိုင်း လေ့လာကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
နတ်မတောင်ကို ၁၉၃၆ခုနှစ်တွင် ဘော်လီကြိုးဝိုင်းအဖြစ်လည်း ကောင်း၊ ၁၉၉၇ခုနှစ်တွင် အမျိုးသားဥယျာဉ်အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ၂ဝဝ၈ ခုနှစ်တွင် အတည်ပြုခဲ့ပြီး နတ်မ တောင်အမျိုးသားဥယျာဉ်တွင် ငှက်မျိုးပေါင်း ၄၃၅ မျိုး၊ တွားသွား သတ္တဝါ ၁ဝ၅ မျိုး၊ နို့တိုက်သတ္တဝါ ၃၄ မျိုး၊ လိပ်ပြာ ၇၇ မျိုး၊ အခွံမာ သတ္တဝါ ၃၅ မျိုးရှိပြီး အပင်မျိုးစိတ် ပေါင်း ၂၅ဝဝ၊ ရေညှိ ၁၅၂၊ သစ်ခွ မျိုး ၂ဝဝ ရှိကြောင်း သိရသည်။
ချင်းတွင်းမြစ်ကူး ဆင်ဖြူရှင် တံတားတွင် တိရစ္ဆာန်ဖြတ်သန်းခ ကောက်ခံနေ၍ တံတားဖြတ်သန်းခ တင်ဒါေ
တောင်ကုတ်မြို့နယ် သုံးထပ်ဈေး ဆောက်လုပ်ရန် စည်ပင်သာယာရေး ဝန်ကြီး ဒေသခံပြည်သူများနှင့် တွေ
မင်းသား ရောဘတ်ဒေါင်းနင်းဂျူနီယာမှာ အော်စကာဆု ထိုက်တန်နေပြီဖြစ်ကြောင်း Russo Brothers ပြောဆို
Chance The Rapper နှင့် Kanye West တို့စုံတွဲ အယ်လ်ဘမ်အသစ် ထွက်ရှိမည်
မြို့နယ်စည်ပင် ဥက္ကဋ္ဌများကို တစ်နှစ်လျှင် ကျပ်သိန်းတစ်ရာ သုံးစွဲခွင့်ပြု
ဒီမိုကရေစီနှင့် ပြည်သူ့အင်အားကို ယုံလျှင် ၂ဝဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံကို ပြင်ဆင်နိုင်မည်ဟု ဒီချုပ်ေ??